နည်းပညာ စာအုပ်များ | Weenyinthit Bookshelf
ကွန်ပြူတာနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့စာအုပ်လေးတွေစုပေးလိုက်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့်ကတော့ ကိုစေတန်ရေးတဲ့ စာအုပ်တြွေုဖစ်ပါတယ်။ Google ကပိုအဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ google မှာပဲတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
၂၀၀၉ ခုနှစ်ရဲ့ survey လေးဖြည့်ပေးပါအုန်း … Popularity: 23% [?]
24 Responses to “နည်းပညာ စာအုပ်များ”
ပဒါး says:	February 8, 2010 at 2:49 am	တန်ဖိုးရှိလိုက်တာဗျာ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် နောက်လည်းအများကိုထပ်ဖြန့်ဝေနိုင်ပါစေ
Reply	Aung kyaw Zaw says:	April 28, 2010 at 10:15 am	ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်
Reply	Nayhtwe says:	May 27, 2010 at 6:45 am	ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်
Reply	ကောင်းမြတ် says:	January 17, 2011 at 3:54 am	ကျွန်တော် ကို. ဖြစ်နိုင်ရင် တစ်ခုလောက်လမ်းညွန်ပေးပါဗျာ Logistic and Supply chain အကြောင်းကို မြန်မာ ပြန်ထားတဲ. စာအုပ်ရှိမရှိနဲ. ရှိခဲ.ရင် ဘယ်မှာရနိုင်မလဲ လမ်းညွန်ပေးပါခင်ဗျာ ကျွန်တော် အရမ်းကို သိချင်လို.ပါ ကျွန်တော် ဆိုဒ် တကာလည်းနှင်္.နေပါပီလိုက်ရှာတာ မတွေ.ပါဘူး ခင်ဗျာ ကျေးဇူးပြုပီးလမ်းညွန်ပေးပါ( ရိုသေစွာဖြင်.)
Reply	Admin says:	March 13, 2011 at 7:44 am	အင်ဂျင်နီ​ယာ ဆိုင်ရာ စာ​အုပ်များေ​ဒါ​င်း​လု​ပ် လု​ပ်နိုင်ရ​န် ဖိ​တ်ေ​ခါ်​ပါ​တ​ယ်
Reply	shanlay says:	June 13, 2012 at 10:51 pm	အကိုရေကျွန်တော်က စက်မှုကျောင်းသားပါ
Reply	nyanminaung says:	August 21, 2011 at 11:14 am	ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Reply	k9 says:	October 6, 2011 at 5:51 pm	ကိုစေတန် ရဲ့ စေတနာကိုလေးစားမိပါတယ်။video editing နှင့် photo ပညာရပ်များနှင့် ပက်သတ်သော စာအုပ်များဖတ်ချင်မိတယ်.တင်ပေးပါဦးနော်။ကျေးဇူးအထူးတင်လျက်….
Reply	bouncy castle hire north london says:	December 26, 2011 at 11:32 pm	Woh I like your articles , saved to fav! . 646513
Reply	ko kyaw mya says:	January 2, 2012 at 9:29 am	ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Reply	ko kyaw mya says:	January 2, 2012 at 10:21 am	happy new year ပါကွန်ပပျူတာပညာရှင်များခင်ဗျာ
Reply	ဦးဘိုဘို says:	January 24, 2012 at 10:04 am	ကျွန်တော်တို့ seafarerတွေအတွက်online စာကြည့်တိုက်ဟာ တန်ဘိုးမဖြတ်နိုင်လောက်အောင် အကျိုးရှိလှပါတယ်….
Reply	nyeinthuzay says:	February 1, 2012 at 10:06 am	်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Reply	ရန်နောင် says:	February 14, 2012 at 11:11 pm	စီစဉ်သူများအားလုံးကိုလေးစားပါတယ်။အရင်ကမရောက်ဘူးပါ၊သူငယ်ချင်းတယောက်က ညွှန်ပြ ခဲ့လို့ လာလည်ရင်း ဗဟုသုတတွေ ရလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့် ကျေးဇူးတင် ကြောင်း ပြောချင်ပါတယ်။ ဓါတ်ပုံပညာ၊ကင်မရာပညာနဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ဆိုက်ကလေးများ သိရင်လမ်းညွှန် ပြစေချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးအထူးတင်လျှက်ပါ။
Reply	ကိုကျော်မြ says:	March 15, 2012 at 4:59 am	ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ…..အခုလိုစာအုပ်လေးတွေကိုတင်ပေးတဲ့အတွက်
Reply	moethu says:	March 25, 2012 at 9:36 pm	ကျေးဇူးပဲံ အကိုရေ …………….
Reply	yamin says:	April 3, 2012 at 9:53 am	ယမင်းကိုတစ်ခုလောက်ကူညီပေးပါလားရှင်
Reply	yamin says:	April 3, 2012 at 9:58 am	အမျိုးသမီးအကျီင်္ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းများနှင့်ပတ်သက်သောကွန်ပြူတာနည်းပညာစာအုပ်များကိုလည်းလေ့လာချင်ပါသည်။ လမ်းညွှန်ကူညီပေးပါဦးနော်
Reply	မျိုးမင်း says:	May 24, 2012 at 10:23 am	အကိုရေ cafe suite စာအုပ် ဖတ်ကြည့်ချင်ပါတယ် အကိုရယ်
Reply	ကိုမင်း says:	August 16, 2012 at 11:57 pm	ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Reply	ု့ခင်သစ်မွန် says:	March 10, 2013 at 11:03 am	အကိုတို့ အမတို့ညီမလေးက ကွန်ပျူတာကျောင်းသူပါ ဒါပေမဲ့ဘာမှမသိဘူး ညီမဘယ်ကနေစလေ့လာရမှာလဲ တစ်ချက်လောက်လမ်းညွှန်စေချင်ပါတယ်။
Reply	min thu says:	April 24, 2013 at 10:34 pm	Youthu Computer သင်တန်းကျောင်းကထုတ်တဲ့ A+ စာအုပ်ရှိတယ်။၀ယ်ဖတ်လိုက်ပါ
Reply	nyinyitun says:	April 2, 2013 at 1:32 pm	ကျေးဇူးပြု၍ကားပြုပြင်ခြင်းဆိုင်ရာစာအုပ်လေးကိုတင်ပြပေးပါလားအခုနောက်လာတဲ့ကားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့ ပညာမသင်ခင်လေ့လာထားချင်လို့ပါကွန်ပျူတာနဲ့စစ်ဆေးပြီးပြုပြင်နေတာကိုအရမ်းဘဲသင်ယူတတ်မြှောက်ချင်လို့ပါခင်ဗျာ
Reply	ကို၇ဲ says:	April 26, 2013 at 11:31 pm	computer နည်းပညာစာအုပ်ကောင်းကောင်းလေးတွေရှိရင်တင်ပေးပါလားနော်